Philips SN503, ny headphones mandrefy ny pulsa anao | Androidsis
Philips SN503, ny headphones mandrefy ny pulse anao
Androany isika dia miresaka iray amin'ireo orinasa malaza sy fantatra amin'ny haitao tato ho ato; Philips. Orinasa iray izay eo amin'ny sehatry ny finday avo lenta, na dia misy aza amin'ny fotoana samihafa, tsy nahavita niavaka mihitsy na nahazo toerana ambony. Nefa tsy azontsika lavina ny maha-zava-dehibe ny asany amin'ny sehatry ny audiovisual sy feo.
Tamin'ny farany fanombohana vokatra mifandraika amin'ny feo miaraka amin'ny fitaovana maro karazana izay tianay hasongadina SN503. Ny sasany headphone tsy misy tariby izay ankoatry ny zavatra rehetra azon'i Philips atolotra, tsy mitovy amin'ny ambiny izy ireo amin'ny fanampiny fanampiny manokana fa hatramin'izao dia mbola tsy nahita zavatra hafa izahay.
1 Philips SN503, mazava ho azy fa tia fanatanjahan-tena
2 In-sofina sensor tahan'ny fo
Philips SN503, mazava ho azy fa tia fanatanjahan-tena
Ny estetika sy ny famolavolana ireo headphone ireo dia mampiseho fa natao ho an'ny asa ara-batana izy ireo ary amin'ny fanatanjahan-tena. Tsy miatrika headphone antsoina hoe TWS izahay satria manana tariby ara-batana izy ireo. Fa izany tokoa tariby ampiasaina hampifandray azy ireo, ary ao anatin'izany ny fanaraha-maso ary ny bateria izany. Ho fanampin'ny tenany tariby Izy io dia hanompo antsika ho hita satria voahitsakitsaka miaraka a fitaovana taratra.
Na dia manana tariby afaka manome fiarovana fanampiny aza izy ireo mba tsy hianjera rehefa mihazakazaka, ohatra, telefaona tsy misy tariby izay koa izy ireo dia mifandray amin'ny finday avo lenta amin'ny alàlan'ny Bluetooth. Izy ireo koa dia voamarina amin'ny fanoherana ny vovoka sy ny rano IPX5. Azontsika atao ny mampiasa azy ireo any ivelany nefa tsy manahy ny amin'ny toetr'andro, ny SN503 dia tsy hijaly amin'ny toetr'andro ratsy.
In-sofina sensor tahan'ny fo
Ny zava-baovao manaitra indrindra ary mampiavaka azy ireo amin'ny ambiny dia tsy isalasalana fa an'ny manana sensor tahan'ny fo. En ny pavilion-tsofinay manana fiafarana nerveuse tsy tambo isaina isika. Izany dia mahatonga azy io ho faritra mety hahazoana fatra azo antoka. Ary Philips, miaraka amin'i Ny SN503 dia nahavita nanara-maso azy ireo tamin'ny alàlan'ny fampiharana marobe be mpampiasa indrindra amin'ny fanatanjahan-tena.
Mikasika ny fizakan-tena, ny bateria nomeny fandidiana hatramin'ny 6 ora. Zavatra manatsara ny fahafantarana fa manana mifanentana izy ireo fiampangana hainganamankany Misaotra an'ity, miaraka amin'ny fiampangana tokana 15 minitra dia afaka manana fizakan-tena maharitra adiny iray isika. Mitady headphone ampiasaina mandritra ny fihazakazahana?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Philips SN503, ny headphones mandrefy ny pulse anao
Ny Samsung Galaxy Note 10 Lite dia misy any Espana izao